သတင်းစုံ ငါးမြင်းယုန် variety | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » သတင်းစုံ ငါးမြင်းယုန် variety
သတင်းစုံ ငါးမြင်းယုန် variety
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Nov 25, 2013 in Aha! Jokes, Satire, Myanma News |5comments
ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အုတ်ကထ ဦးတင်အေးက သမဒဂျီးနှင့်သူ နီးကပ်စွာ နေခြင်းမှာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ခင်မင်မှုသာဖြစ်ပီး နိုင်ငံရေး ဆက်နွယ်မှု မရှိဂျောင်း ပြောဆိုလိုက်သည့်အတွက် ၎င်းတို့နှစ်ဦး ပူးပူးကပ်ကပ် နေဂျင်းသည် သွေးရိုးသားရိုး မဖြစ်နိုင်ဂျောင်း လိင်တူချသူများ လေ့လာစောင့်ကြည့်ရေး ကော်မတီမှ ထုတ်ဖေါ် ပြောဆိုသည်။
မြန်တျန့်သဂျီး မာမွတ်ခိုမ်မှ ၎င်းအား ၇၈၆ မူလာဂျီးဟု စွပ်စွဲနေသော ဂဇက်ရွာ ဖတ်ရွဲ့အဖွဲ့ သုံးလဆက်တိုက် အကြိုက်ဆုံးစာမူဆုရှင် ဘက်စ်ဆဲလား စာရေးဆရာ ဦးကြောင်ကြီးအား တရားစွဲမည်ဟု ခြိမ်းခြောက်လိုက်ပီး ယင်းအချိန်ကြမှ ထွက်မပြေးရန် သတိပေးထားသည်။ မြန်တျန့်ပြည် စာနယ်ဇင်း အခွင့်အရေး ကော်မတီကမူ မတရားရုံးမှ ဦးကြောင် ယင်းထချိန် ပြာသိုလတွင် တမင်ရွေးချယ် ဆင့်ခေါ်မည်ကို စိုးရိမ်မကင်း ဖြစ်နေသည်။
ရန်ကုန်လာရောက်လည်ပတ်သော ရုရှားစစ်သင်္ဘောသုံးစီး ဆိပ်ကမ်းရပ်နားစဉ် ပစ္စည်းကိရိယာများအားလုံး ချွတ်ယူခိုးသွား၍ ဗလာ naked ပြန်သွားရပြီးနောက် မြန်တျန့်ကာကွယ်ရေးဝံဂျီးဌာန ဆိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေးရုံး နှင့် (ကကဆိတ်) ဓာတ်ပုံရိုက်ရန် ရုရှားတင်းနစ်မယ် ရှာရာပိုဗာ လာရောက်မည့် အစီအစဉ်အား လုံခြုံရေး အကြောင်းပြချက်ဖြင့် ရက်အကန့်အသတ်မရှိ ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်သည်။
မန်းဒလေးမြို့တွင် နိုဝင်ဘာ ၂၀ရက်နေ့က ဖမ်းဆီးရမိသော လက်လုပ်ဗုံးနှင့် အခြားလက်နက်ကိရိယာများ ကွင်းဆက် လိုက်လံရှာဖွေရာ မြန်တျန့်ဂေဇက်ရွာ မူလာဂျီး မာမွတ်ခိုမ်ထံတွင် ညူကလီယားဗုံးလုပ်နည်း တွေ့ရှိဂျောင်း သတင်းမှာ ဗလာစာအုပ်တွင် မာမွတ်ခိုမ် ရေးမှတ်ထားသော e=mc2 ဆယ်တန်း ရူပဗေဒ ဖော်မြူလာအား ချဲ့ကားပြောထားဂျင်းဖြစ်သည်။
မြန်တျန့်ဂေဇက်ရွာအတွင်း အစ္စလာမ်ဘာသာ အများစု ကိုးကွယ်သော ကမန်လူဦးရေ စာရင်းကောက်ယူရာ သဂျီးမာမွတ်ခိုမ် တဦးထဲသာ ရှိဂျောင်း သိရပြီး သူ့မိတ်ဆွေ ဆလိုင်းဖင်ပြောင်နှင့် အေ့ဝဒဂျီးတို့မှာ ဝှိုက်ကတ် ကိုင်ဆောင်ထားသော ဘင်္ဂါလီများ ဖြစ်ကြောင်း လူဝံမှုကျီးကြက်ရေးရုံး စစ်တမ်းတွင် ဖော်ပြသည်။
ဒါဆို သမဒဂျီးက ကပုနဲ့ကြောင်ရီး ဂိုဏ်းဝင်ဖစ်နိုင်တာပေါ့
မြန်​ကျန့်​သားတို့ကအချွတ်​မကြမ်းပါဘူးဗျာ သူ​လေးကဝတ်​မလာတာဗျ ပြီး​တော့လည်း……..
အရှိဂို အရှိအတိုင်း အခြွင်းအချန်မရှိ
မကောင်းဘူးဟု ပြောတီကို မကောင်းဘူးဟု ထိုလူမှ ပြောတီဟု ရေးရဗာဒယ်
တဘဲ့ကြောင် အား လောကဆရာဂျီး ပလော်ဖက်ဆာ အံချာဒုံး မှ သင်ပျတီ
ငါးမြင်းရယ် ယုန်ရယ် ကြောင်ရယ်ပေါင်းရင် အမြည်းကောင်းကောင်းတော့ရဘီ :sar:
အာ့ဂျောင့်လည်း ဒဂျီးက တစ်ယောက်ထဲ ဖြစ်နေတာပေါ့